Meya veHarare, VaJacob Mafume, avo vakamiswa basa neMuvhuro negurukota rinoona nezvematunhu nemadhorobha, VaJuly Moyo, vacharamba vari mutirongo mushure mekunge dare rapamusoro, rasendeka parutivi mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavri kupomerwa.
Mushure mekunzwa kubva kumativi ese panyaya iyi neMuvhuro, Justice Benjamin Chikowero, vati vanoda nguva yekuzeya zvabuda mudare nekudaro vasendeka parutivi mutongo wavo panyaya iyi.
Gweta raVaMafume, VaTonderai Batasara, vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti mutongo panyaya iyi uchapihwa nekusika.
VaMafume vakakwidza nyaya yavo kudare iri vachitsutsumwa nemutongo wakapihwa nedare ramajisitireti wekuvanyima mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa.
VaMafume vanonzi vakapindira pakuferefetwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakaita huori pakupa nzvimbo yekuvakira hanzvadzi yavo Rotina Mafume uye munyori kukambani yavo Rutendo Muvuti.
Mutongi wedare VaNgoni Nduna vakati VaMafume vanogona kuramba vachipindiri mukuferefetwa kwenyaya dzavo kana vakabhadhariswa mari yechibatiso.
Izvi zvinotevera hufakazi hwakapihwa nemumwe mufakazi panyaya iyi, VaEdgar Dzehonye, hwekuti VaMafume, vainge vaedza kuvapa zviuru zvishanu nemazana mashanu zvemadhora eku America kuti vape hufakazi hwakanaka panyaya yavo.
Asi VaMafume vari kuti zvese izvi manyepo vachiti havana kutombosangana nemufakazi uyu uye kunyange pavakusungwa vachinzi vaidza kumupa churu chemadhora ekuAmerica vakawanikwa vaine madhora makumi matanhatu nemashau chete.
VaMafume vanoti dare ramajisitireti rakakanganisa parakavanyima mukana wekubhadhara mari yechibataiso nekudaro vanoda kuti dare repamusoro rirase mutongo uyu.
Sachigaro weMDC Alliance, bato raVaMafume, VaWellingtton Chikombo, vati havasi kufara kuti VaMafume vari kuramba vari kutirongo vachiti nyaya yavo ngaitongwe nekukasika.
Vatiwo havana mufaro nekuti VaMafume vakamiswa basa ravo rehumeya vari mutirongo. Zvichakadai kanzuru yeHarare yaita musangano wekutsvaga munhu achasanobata chinzvimbo chameya weguta zvichitevera kusungwa kwaVaMafume.
Hapana chabuda pamusangano uyu sezvo papinda makanzura gumi nemumwe chete asi pachidiwa makanzura gumi nemanomwe kuti paitwe chisungo chiri pamutemo.
Makanzura apinda mumusangano uyu azoita chisungo chekuti, VaStewart Mtizwa, vanosanobata chinzvimbo chameya kusvika paitwa musangano wekudoma kusarudza meya.
Kanzuru yeHarare yasara nemakanzura gumi nevapfumbamwe chete, vamwe vakunngwa, vamwe vakadzingwa basa nekuda kwemakakatanwa ari muzvikwata zveMDC uye vamwe vakafa.